Igumbi Elincane Elibheke Ulwandle eLa Mora - I-Airbnb
Igumbi Elincane Elibheke Ulwandle eLa Mora
San Agustinillo , Oaxaca, i-Mexico
Igumbi e-ihhotela ibungazwe ngu-Rosa Elba
Igumbi elincane kunawo wonke e-Inn futhi kulo ungakwazi ukujabulela ukunethezeka kombhede wakho ophindwe kabili ngamashidi kakotini, ishawa ngamanzi ashisayo uma uthanda, zipholisa ngomoya opholile uma ukushisa kungaphezu kwamandla noma uvele uphumele ethafeni. futhi ujabulele umoya opholile kanye umbono ulwandle.
Ikamelo, nakuba amancane, has izici ezidingekayo ukuze abe ukuphumula aqabulayo, igumbi has a embhedeni kabili, yokugezela yangasese ngamanzi ashisayo, minibar, umlandeli, air conditioning, ephephile, lolwandle isambulela, Pareo kanye namasheya the ithala Ocean umbono nge amanye amagumbi amabili, itholakala ikhuphuka izitebhisi futhi ilungele ukuqala usuku ngamandla adingekayo ukuze ujabulele i-San Agustinillo nendawo eyizungezile.
I-San Agustinillo iyidolobha elizinikezele kwezokuvakasha nokudoba, idolobha elithule kakhulu, wonke amabhizinisi avala ngo-10pm, ulwandle luhle kakhulu futhi ungakwazi ukubhukuda noma ukuntweza olwandle, kuye ngezimo zosuku ngalunye.
Edolobheni, ukugibela izikebhe ezihamba ngezimoto kunikezwa ukuvakashela itshe lezinyoni nokuyofuna amahlengethwa, izimfudu, imisebe ye-manta nemikhomo uma kuyisikhathi sonyaka. Kukhona isitolo sezimpahla zendabuko esinezinto ezinhle kakhulu nezisezingeni eliphezulu kakhulu. Omunye umsebenzi ojabulisayo ukuthatha isifundo se-surf noma i-boogie. E-Mazunte ungaqasha uhambo lwe-rafting, ukuhamba ngezinyawo kanye nokutshuza, ngaphezu kokuvakashela i-Mexican Center of the Turtle.
Ibungazwe ngu-Rosa Elba
Nsuku zonke, ngaphandle kwangoLwesibili, uzongibona, uCiria, uLorena, uJulia no-Andrea endlini yezihambi ekuseni futhi umngane wethu u-Angelo uzobe elapho ntambama. Ngezinye izikhathi ngiya ohambweni kodwa lonke ithimba liyoba khona ukuze likusize, ngaphezu kokutholakala amahora angu-24 kumakhalekhukhwini wami.
Nsuku zonke, ngaphandle kwangoLwesibili, uzongibona, uCiria, uLorena, uJulia no-Andrea endlini yezihambi ekuseni futhi umngane wethu u-Angelo uzobe elapho ntambama. Ngezinye izikha…